Sivana polimerika tsara indrindra ho an'ny mpanamboatra sy ny orinasa Factory. Manfre
Ny sivana miempo dia fitaovana iray ilaina amin'ny famolavolana haingam-pandeha haingam-pandeha sy ny fihodinana tsara-denier. Izy io dia ampiasaina amin'ny filtration polymer tsy mitsaha-mitombo mba hanesorana ny loto sy ny poti-tsy matevina ao anaty menaka hanatsarana ny fihodinan'ny fikotrana. Ary hiantohana ny kalitaon'ny fihodinana.
Ny sivana mitsonika dia ampiasaina amin'ny filtration mitohy amin'ny polymer avo lenta mba hanesorana ireo loto sy poti-tsy mihosin-tsolika ao anaty menaka, hanatsara ny fahombiazan'ny fihodinana ary hiantoka ny kalitaon'ny fihodinana. Ny sivana mitsonika dia fitaovana ilaina amin'ny famolahana haingam-pandeha haingam-pandeha sy ny fihodinana tsara-denier. Izy io dia mitana anjara toerana miharihary amin'ny fanitarana ny androm-piainan'ireo singa mihodina, fanatsarana ny fampiasana fitaovana ary fampitomboana ny vokatra.
Amin'ny famokarana nonwoven spunbonded, mba hiantohana ny fizotran'ny fizotran'ny fihodinana sy hampihenana ny fisian'ny filamenta tapaka sy ny fitetezana dia apetraka amin'ny fitaovana sivana roa amin'ny ankapobeny. Ny sivana voalohany (sivana masiaka) dia apetraka eo anelanelan'ny extruder visy sy ny paompy fandrefesana, ary ny asany lehibe indrindra dia ny fanivanana ireo loto lehibe kokoa, mba hanitarana ny fotoana fampiasana ny fitaovana sivana faharoa ary hiarovana ny paompy fandrefesana sy ny paompy mihodina. , Mba hampitomboana ny tsindry aorinan'ny extruder, amin'izany dia mandray anjara amin'ny famoahana sy ny fanaovana plastika ny fitaovana mandritra ny famoretana. Ny sivana faharoa (sivana tsara) dia apetraka ao amin'ny fivondronan'ny kodiarana, ary ny asany lehibe indrindra dia ny fanivanana ny loto maloto, teboka kristaly, sns., Hisorohana ny fanakanana ny spinneret, hiantohana ny fandrosoana milamina sy hanatsarana ny kalitao ny fibra. Ny endrik'ilay efijery sivana dia miankina amin'ny endrika sy haben'ny spinneret, ary amin'ny ankapobeny dia sivana mahitsizoro multilayer izy io.
Teo aloha: Sivana labozia ho an'ny tsipika sarimihetsika BOPP
Manaraka: Sivana labozia tsy misy fangarony ho an'ny famokarana kofehy polyester
Rafitra sivana polymer
Spinning Mesh Filter BOPP sivana ho an'ny BOPP% Vinyl ...
Perforated Tube Punch Tube Filter miaraka amin'ny fahasamihafana ...